Carewell SEIU 503 | Dhamaystiraan Tababarka Xirfadaha Cusub Marki La Gaaro ama Ka Hor Juun 30
Tabbabarka Xirfadaha Cusub ee Gobolka-uu uga baahan yahay Shaqaalaha Hadda Shaqeeya
Akhbaar wanaagsan! SEIU 503 ayaa kala shaqeeyay gobalka inuu u kordhiyo taariikhda kama damabayska ah ee tabbabarka xirfadaha cusub Juun 30.
Waxaan fahansanahay markay xirfadaada tahay inaad dadka kale daryeesho, inaad adkaan karto inaad wakhti u hesho tabbabarka. Daryeel bixiyeyaasha waxay leeyihiin jadwal mashquul badan. Carewell ayaa diyaar kuu ah inay ku taageerto si aad u bogto wakhtiga saxda ah.
Faahfaahinada muhiimka ah:
Taariikhda cusub ee kama dambayska ah ee tabbabarka xirfadaha cusub ayaa ah Juun 30.
Tabbabarka waa labo qaybood, waana onleen gebi ahaanba.
Waxaad u heli doontaa $200 gunno ahaan ka dib markaad dhammayso.
Waan ku cusbahay tabbabarka
Kolhore ayaan isku diwaangeliyay tabbabarka
Samee su’aalahan si aad u aragto haddii lagaa rabo inaad qaadato Tababarka Xirfadaha Cusub
Xaq u Yeelashada Tabbabarka
Ma tahay shaqaalaha daryeelka guriga, shaqaalaha taageerada shaqsiga, ama bixiyeyaasha daryeelka shaqsiyadeed? Ma hubtid nooca tabbabarka aad qaadan lahayd ama haddii aad u baahan tahay inaad tabbabar qaadato? Buuxi su'aalahan xog-uruurinta si aad u hesho wadadi aad qaadi lahayd.
Ma heshay lambarka bixiyaha ka hor Seteembar 1. 2021?*
Fadlan dooro haa ama maya.
Ma qaadatay taxanaha Tabbabarka Shaqaalaha Cusub oo ay ku jiraan Tabbabarka Shaqada, Tabbabarka Aasaasiga Onleenka ah, iyo Aqoon Isweydaarsiga Aassaasiga ah waqti ka mid ah 2020 ama 2021?*
Kolhore miyaad bogtay Tabbabarka Xirfadaha Cusub oo ay ku jiraan Tabbabarka Xirfadaha Cusub ee Onleenka ah iyo Aqoon Isweydaarsiga Xirfadaha Cusub?*
Ma leedahay shahaadada Professional Development Certificate (PDC) oo shaqaynaysa?*
Fadlan dooro haa, maya ama ma hubo.
Ma tahay Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed ee Heerkoodu Sarreeyo?*
Ma tahay shaqaalaha taageerada shaqsiyeed ee reeban?*
Miyaad heshay shahaadada aqoonsiga ee Shaqaalaha Caafimaadka Fayodhowrka ee uu bixiyo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon (OHCC)?*
Ma heysataa shahaadada aqoonsiga Ventilator Dependent Quadriplegia (VDQ)?*
Yaa u baahan inuu qaato Tababarka Xirfadaha Cusub?
Dhammaan bixiyeyaasha daryeelka guriga iyo taageerada shakhsi ahaaneed iyo ka-qaybgalayaasha daryeelka shakhsi ahaaneed ee lagu bixiyo Medicaid ama Madax-bannaanida Mashruuca Oregon waxaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan Tababarka Xirfadaha Cusub. Bixiyeyaasha daryeelka qaarkood ayaa laga yaabaa in laga dhaafo. Arag FAQ geena si aad wax badan uga barato.
Sidee ayuu u eg yahay tababarku?
Tababarka Xirfadaha Cusub waxa ku jira 12.5 saacadood oo waxbarasho ah, dhammaan onlayn, oo loo qaybiyay laba qaybood:
Qaybta 1-aad: Tabbabarka Xirfadaha Cusub ee Onleenka ah
ee 8-saacadood, koorsada onlaynka oo aad qaadan karto marka ay kugu habboon tahay. Koorsadan ayaa dib u eegeysa aasaaska bixinta daryeelka badbaadada leh, macaamiisha diiradda saaraya iyo xeerarka daryeel bixiye.
Qaybta 2-aad: Aqoon Isweydaarsiga Xirfadaha Cusub
4.5-saac aqoon-isweydaarsi toos ah ayaa laga heli karaa onlayn dhowr jeer todobaadkii, oo ay ku jiraan maalmaha fasaxa ah. Aqoon-is-weydaarsigu wuxuu diiradda saarayaa xoojinta xiriirka iyo xirfadaha xallinta mashaakilaadka iyo bixinta adeegyada xuddunta u ah baahida macaamiishaada.
Goorma ayaa loo baahan yahay in tababarka la dhammeeyo?
Tabbabarka Xirfadaha Cusub waa in la dhammeeystiraa Juun 30, 2022, si aad u sii haysato lambarkaaga adeeg bixiyaha. Haddii aad u baahan tahay taageero si aad tababarka ugu qaadato luqad aan Ingiriisi ahayn ama helitaan tignoolajiyadeed, Carewell waxay halkan u joogtaa inay ku caawiso.
Iska diwaangeli Hadda
Baro xirfado qiimo leh mustaqbalkaaga
Tababbarka Xirfadaha Cusub waxa uu kaa caawinayaa xoojinta xirfadahaaga daryeel iyo in si kalsooni leh loo maareeyo caqabadaha maalinlaha ah.
Mawduucyada waxaa kamid ah:
Adeegyada ku saleysan shakhsiga
Xuquuqda macamiisha iyo qarsoodida
Bixinta adeegyada baaxadda leh
Ka hortagga khiyaanada Medicaid
Daryeel bixiyaha iyo badqabka macamiilka
Warbixinta qasabka ah iyo ka hortagga xadgudubyada
Wargelinta xaqiiqada ah
Kor u qaadida ka qaybgelinta bulshada
Fahamitaanka qaabka isgaarsiinta
Dhisida xirfadaha wada-xiriirka
Tabar dhaca iyo walaaca xad dhaafka ah
Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino tallaabo kasta oo jidka ah
Tababar luuqado badan ku baxa
Tababarku hadda waxa lagu heli karaa Carabi, Shiine la fududeeyay, Ingiriisi, Ruush, Soomaali, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis. Haddii aad u baahan tahay taageero luqad kale, Carewell waxay kuu ballansan kartaa turjumaan.
Isticmaalka internetka iyo qalabka
Haddii marinka interneedkaagu uu xadidan yahay ama aadan haysan talefanka casriga ah, tablet-ka, ama kombayutarka, waxaanu kaa caawin karnaa helitaanka taageerada ama nooca offlaynka ee tababarka. Fadlan nala soo xiriir si aan u helno ikhtiyaar sida fiican kuugu shaqeeya.
Wixii ah taageerada dhammaystirka tababarka xirfadaha cusub, naga soo wac 1-844-503-7348 ama noogu soo dir iimayl barta carewellseiu503training@risepartnership.com.
Macluumaadka Maalinta Kama Dambayska ah
Miyaan dhab ahaantii dhameeyay tabbabarka? Sideen ku ogaan karaa?
Waxaad gabagabaysay tabbabarka markaad bogto Tabbabarka Xirfadaha Cusub ee Onleenka ah, Aqoon Isweydaarsiga Xirfadaha Cusub, iyo xog-uruurin kasta oo la xiriirta mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waxaad ku ogaan kartaa xaaladaada dhamaystirka inaa gasho bogga Intarnetka ee barashada. Tag “My Courses” (“Koorsooyinkeyga”.) Haddii aad bogtay Tabbabarka Xirfadaha Cusub, waa inaad aragto sanduuq cagaaran oo ku qoraya “completed” (“la bogay”) koorsooyinka “Tabbabarka Xirfadaha Cusub ee Onleenka ah” iyo “Aqoon Isweydaarsiga Xirfadaha Cusub” hoostooda. Haddii midkood koorsooyinka ay ku hoos qoran tahay “start” (“bilow”) ama “resume” (“dib u bilow”) oo ku jirta sanduuq buluug-guduud ah ama oranji ah, waxaad wali u baahan tahay inaad dhamaystirto qaybtaas tababarka. Waxaad sidoo kale ku arki kartaa tabbabarka PTC koorsooyinkaaga. Tani looma baahna.
Markaad bogto qayb kasta oo ka mid ah tabbabarka, waa inaad sidoo kale shahaado ku hesho bogga Intarnetka ee barashada oo leh taariikhda aad dhamaysay. Waxaad ka heli kartaa shahaadooyin qaybta warqada natiijada ee bogga Intarnetka ee barashada.
Maxaa dhacaya haddii aanan bogin tabbabarka marki la gaadho ama ka hor Maarso 31?
Waqtiyada kama dambeyska ah ee tabbabarka xirfadaha cusub ayaa wakhtiga loo kordhiyay ilaa iyo Juun 30. Hadda waxaad haysataa wakhti dheeraad ah oo aad ku dhamaystirto. Qorshahaaga samayso si aad u dhamaystirto maanta.
Waa maxay taariikhda cusub ee kama dambayska ah ee tabbabarka xirfadaha cusub?
Taariikhda cusub ee kama dambayska ah ee tabbabarka xirfadaha cusub waa Juun 30, 2022.
Maxaan sameeyaa haddii aan warqad joojin ah ka helo Gobalka? Sideen ku sii haysan karaa lambarkayga adeeg bixinta?
Haddii warqad joojin ah laguu soo diro, waxaad codsan kartaa dacwad dhagaysi si aad racfaan uga qaadato go’aanka. Haddii aad dacwad dhagaysi codsato oo aad dhamaystirto tabbabarka ka hor dacwad dhagaysiga, lambarkaaga adeeg bixiyaha ayaa sii shaqayn doona.
Ma inaan bixiyaa kharashka tabbabarka?
Maya. Tabbabarku waa u bilaash dhammaan daryeelka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed.
Mala isiin doonaa gunno kusaabsan tabbabarka aan qaato?
Waxaa lagu siin doonaa gunno wakhtiga aad ka qaybqaadatay fadhiyada tababarka dib u soo kicinta ee loo baahan yahay. Waxa jira $135 gunno ah oo lagu dhammaystirayo Tabbabarka Xirfadaha Cusub ee Onleenka ah iyo $65 gunno ah oo loogu talagalay dhammaystirka Aqoon isweydaarsiga Xirfadaha Cusub.
Fadlan ogoow, haddii lagaa dhaafay shuruuda Tabbabarka Xirfadaha Cusub, xaq uma lihid gunno. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan ka dhaafitaanada, fadlan eeg Su’aalaha Inta Badan La Iska Waydiiso (FAQ) ka dhaafitaanada.
Markaad si guul leh u dhammaysato koorsadaada u qalmida gunnada, waxaad iimayl ku heli doontaa kaarka Visa oo ay kujirto gunnadaada. Si aad u hesho gunnooyinka waqtiga saxda ah, fadlan xaqiiji in cinwaankaaga boostada iyo cinwaankaaga iimaylka ay ka saxan yihiin cinwaankaaga Carewell Learning Portal (Bogga Intarnetka Barashada ee Carewell). Lacagta gunnada waxa la soo diraa laba jeer bishii, marka waxa ay qaadan kartaa dhawr toddobaad in gunnada laguu soo gaadhsiiyo. Macluumaad dheeri ah, fadlan eegSiyaasadda Lacag-bixinta.
Fadlan ogoow haddii lagaa dhaafay shuruuda Tabbabarka Xirfadaha Cusub, xaq uma lihid gunno\_. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan ka dhaafitaanada, fadlan eeg Su’aalaha Inta Badan La Iska Waydiiso (FAQ) ka dhaafitaanada.
Sideen u furaa kaarkayga gunnada?
Kaarka OmniCard (gunnooyinka la bixiyay ka hor 3/1/22): Gal https://www.omnicard.com/cards/activate oo raac tilmaamaha ku jira websaydhka. Waxaad sidoo kale wici kartaa 1-877-357-4975 waxaadna riixaysaa 1.
Kaarka Blackhawk (gunnooyinka la bixiyay ka dib 3/1/22): Gal https://www.myprepaidcenter.com/login/card oo raac tilmaamaha ku jira websaydhka. Waxaad sidoo kale wici kartaa 1-866-829-0707 waxaadna riixaysaa 1.
Xageen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaarkayga gunnada?
Kaarka OmniCard (gunnooyinka la bixiyay ka hor 3/1/22): Si aad u hesho Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ) ee la xiriira kaarkaaga gunnada, gal https://www.omnicard.com/cards/faq.
Kaarka Blackhawk (gunnooyinka la bixiyay ka dib 3/1/22): Si aad u hesho Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ) ee la xiriira kaarkaaga gunnada, gal https://www.myprepaidcenter.com/faq?type=generic.
Maxay gunnadayda u qaadatay wakhti dheer inay igu soo gaarto?
Gunnooyinka waxaa lagu bixiyaa iyada oo lagu salaynayo jadwalka hoose:
Waxaa dhici kara dib u dhac haddii uu jiro qalad sida cinwaanka boostada oo qaldan ama akoono isku mid ah oo ku jira Bogga Intarnetka ee Barashada. Xaaladahan oo kale, waxay qaadan kartaa 3-4 toddobaad si dib loogu bixiyo kaarka gunnada. Wakhtiga soo safrinta sida caadiga ah waa 1-2 toddobaad. Fadlan hubi in cinwaankaaga boostada ee ku jira Bogga Intarnetka ee Barashada iyo midka gobalka uu hayo ay saxan yihiin si loo xaqiijiyo in si hufan looga shaqeeyo gunnada.
Iyada oo ay ugu wacan tahay tirada gunnooyinka laga shaqaynayo oo aad u badan, waxaa jiri kara dib u dhac ilaa iyo 6 toddobaad ah ka hor inta aadan gunnooyinka helin. Waxaan kaga shaqaynaynaa gunnooyinka sida ugu dhakhsaha badan waxaana ku dadaalaynaa inaad si degdeg ah ku hesho gunnooyinkaaga.
Si aad u cusboonaysiiso cinwaankaaga boostada, booqo Bogga Intarnetka ee Barashada oo guji sawir calaamadeedka qof ee buluug-guduudka ah ee jira dhinaca midig ee kore ee shaashada. Ka dib, guji “Edit Profile” (“Wax ka Beddel Cinwaanka”) si aad u baddesho cinwaankaaga iyo macluumaadka kale ee tirakoob.
Macluumaadka Gelidda iyo Bogga Intarnetka Barashada
Sideen dib ugu baddelaa lambar sireedkayga?
Tag bogga gelitaanka. Meeshaas markaa joogto, haddii aadan aqoonin lambar sireedkaaga, waxaad gujin kartaa “Forgot Password (Lambar Sireedka Ayaan Iloobay)” taas oo markaas iimayl kuugu soo diri doonta xiriiriye aa ku saxato lambar sireedkaaga. Haddii aadan arkin iimaylka sixida lambar sireedka isla markaaba, fadlan ka eeg sanduuqaaga spam.
Ka waran haddii aan xusuusanin magacayga adeegsadaha?
Magacaaga adeegsadaha waa inuu ahaado cinwaankaaga iimaylka. Isku day inaad midkaas ku gasho. Haddii ay midan kuu shaqayn waydo, naga soo wac 844-503-7348 ama noogu soo dir iimayl CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.
Waxaan ka helayaa fariin cilad ama waxaan dhib ku qabaa bogga intarnetka ee barashada. Maxaan sameeyaa?
Haddii aad la kulanto dhib xaga bogga intarnetka barashada ah, sida farriin cilad, shaashad cadiin ku soo kacda, ciladaha maqalka, i.w.m., waa kuwan tallaabooyin aad isku dayi karto.
Fiiri intarnetkaaga shaqayntiisa.
Ka tir cookies birowsarka. Haddii aadan hubin sida loo sameeyo midaas, ka raadi google sida cookies-ka looga tirtiro birowsarka.
Dib u kici aaladaada (laptop, desktop, tablet, ama taleefon).
Isku day birowsar cusub (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari) – La soco: bogga tabbabarka si wanaagsan uguma shaqeeyo Apple Safari.
Xir boggaga iyo barnaamijyada kale inta aad ku shaqaynaysid bogga intarnetka ee barashada.
Iimayl inoo soo dir waxaan ku siin karnaa taageero. Fadlan soo raaci macluumaadka soo socda haddii aad la soo xirrito kooxdeena taageerada:
Nooca aalada aad isticmaalayso? (kombuyuutar, teleefanka gacanta, tablet-ka)
Nooca birowsarka aad isticmaalayso? (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari)
Dhibaatooyin noocee ah ayaad qabtaa? (ku dhagan magaca qaybta cashirka, boggag/hawl/muuqaal gaar ah, faahfaahinta ku saabsan dhibaatada, fariinta cillada, dhibaatooyinka maqalka)
Qorshe samayso si aad u bogto sida ugu dhakhsaha badan.
Hoos ku dhufo si aad u booqato Carewell Learning Portal (Bogga Intarnetka Barashada ee Carewell) oo dib u gal Tabbabarka Xirfadaha Cusub.